Su'aalaha Wareysiga Xirfadleyda Sayniska ee PMP - Iskuulka ITS Tech
Wareysiga la siiyey hubin iyo hubaal waa wax walba oo dahab ah. Iyadoo aan loo eegin haddii aad tahay dabeecad ama aad ubaahantahay xirfad aad ku guulaysato marka aad ka shaqeyneyso shaqadaada khiyaaliga ah. Halkan waxaa ah su'aalaha wareysiga 14 iyo Jawaabaha loogu talagalay PMP shahaadada xirfadlaha si aad ugu guuleysato imtixaanka wareysiga marka ugu horeysa.
Maareynta Maareynta Su'aalaha iyo Jawaabaha
Su'aalaha Wareysiga PMP iyo Jawaabtoodii ugu Fiican:
1. Isku kay sheeg.
Isku day inaadna ku dhameysato diyaargarasyo ​​xirfad leh oo ku saabsan fekerkaaga. Waqtiga marka uu waraystuhu soo saaro su'aashan waxay u baahan yihiin inay ogaadaan waxa aad u malaynayso inaad ugu fiican tahay booskan, sidaas darteed u jawaab jawaabta. Iskuday inaadan ku darin noloshaada adigoo ka jawaabaya su'aalahan, si fudud ku dheji xirfadlaha.
2. Xaggee ayaad ka heshay waqti dhow?
Taariikhdaadii hore ee shaqada ee la xidhiidha xaqiijinta ballanqaadka PMP. U sheeg guulahaaga dhabta ah iyo abaalmarin kasta. Sidoo kale waxaad ku sheegi kartaa habkee u dhigi doona booskan oo kuu ogolaanaya inaad ku sii socotid rabitaankaaga.
3. Miyaad ku lug leedahay xirfaddan?
Noqo toos ah jawaabtan. Su'aalaha la socoshada waxay noqon karaan xudduudaha shaqada ee aad la shaqeysey iyo wixii dhacdooyin ah oo muujinaya aasaas aad uwanaagsan.
4. Maxay yihiin caqabadaha aad rajeyneyso in aad maareyn kartid shaqadan?
Iyada oo la iftiimayo kulannadaadii hore, jawaabtaada waa in lagu daraa isku darka casharro la taaban karo iyo waxa laga yaabo inaad u gudbiso shirkad cusub.
5. Xaggee ayaad ku aragtaa wakhtiga 5 sanadka?
Marka la eego xaqiijinta maamulka ganacsigaaga, waxaad u maleyneysaa in aad u baahan tahay inaad ka shaqeysid ururka oo aad awood u yeelatid si aad u gaarto guulo kale.
6. Maxaad uga tagtay shaqadaadii ugu dambeysay?
Raadinta albaabbada furan ama fursad ay ku shaqeeyaan meel kale. Kala hadal sida ay isugu diyaarinayso qorshaha PMP ayaa ka dhigtay suurtogalnimada inaad ka shaqayso ururkan si ka wanaagsan.
7. Maxay tahay guulaha ugu muhiimsan ee aad gaadhay?
Ka hadal guulahaaga, waajibaadyada iyo dhaqanka koox ahaan si faahfaahsan, iyo sida ay faa'iido u tahay hindisaha iyo ururka oo dhan.
8. Maxaanu awoodi karnaa inaan kaa filanno maalmaha 90 ee hore?
Samee jawaab-celin taxadar leh meesha aad ka dhigi karto PMP-gaagu inuu diyaar u yahay inuu isticmaalo natiijooyinka ugu wanaagsan.
9. Waa maxay waxa aad rabto?
Diyaarso horey u sii diyaarso oo u sheeg kalsooni oo ogsoonow awooddaada, gaar ahaan marka la eego aqoonsiga maamulka ganacsiga.
10. Ma runbaa inaad tahay qof wada shaqeeya?
Waraysiyeyaashu waxay u baahan yihiin inay ogaadaan haddii aad la shaqayn karto kooxda uqalmaasho iyo haddii ay muhiim tahay, diyaariso kuwa kale.
11. Miyaad wax ballanqaad ah ku samaysay maareynta maamulka hanti-dhisida?
Haddii ay dhacdo in aad ilaalisay kiis ay dib-u-eegis ku samaysay maamulka ganacsiga, waxaad baraysaa kormeerka ku saabsan oo u ogolaataa su'aalaha ka-hortagga.
12. Maxaa nagu soo kaxeynaya?
Kala hadal waxa jiidka ku jira ururkan iyo waxa aad u keento miiska.
13. Sidee ayaad uga hortagi kartaa caqabadaha hortaagan?
U fiirso caqabadaha shaqada ee aad ka hor jeeday macaamilka ama sida aad ula macaamishay xaalad khaldan oo ku jirta hawl.
14. Miyaad miisaan ka shaqeyneysaa?
Marka laga hadlo suurtagalnimada in welwelka maamulka uu yahay wax aad tahay, markaa markaa markaa u sheeg sida aad uga xanaaq badan tahay xaaladaha khasabka ah.
Arag sidoo kale:Fursadaha Xirfadda Shaqaalaha ee Sayniska PMP
MCSA Certified Professional - Su'aalo iyo Jawaabo Wareysi